Global Voices teny Malagasy » Manan-kery ao anatin’ny ahiahy mikasika ny vonjy taitra COVID-19 ny lalàna momba ny “vaovao hosoka” ao Malezia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Avrily 2021 4:20 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, COVID-19, GV Mpisolovava
Ireo takelaka nampiasain'ny mpikatroka nandritra ny fihetsiketsehana iray teo akaikin’ ny Parlemanta, mitaky ny fanafoanana ilay didim-pitsarana ‘vaovao sandoka’. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'ny Centre for Independent journalism.
Nanomboka nanan-kery tamin'ny 12 Martsa ny didim-pitsarana 2021 momba ny Vonjy Taitra ao Malezia (Fahefana Ankapobe = Essential Powers) (No. 2), fepetra  iray manameloka ny famoahana “vaovao sandoka” mifandraika amin'ny COVID-19.
Nanambara hamehana  [mg] ny governemanta Perikatan Nasional (PN) tamin'ny 12 janoary mba hifehezana ny fitomboan'ny tranga COVID-19. Saingy mino ireo mpitsikera fa nikasa ny hampiasa azy io mba hijanonana eo amin'ny fitondrana ny PN matoa nampiato ny fotoam-pivorian'ny parlemanta sy nandràra ny fifidianana. Nampitandrina ihany koa ireo mpikatroka fa mety hitarika amin'ny famoretana ny fahalalahana miteny ilay fanambarana satria namela ny manampahefana hisambotra olom-pirenena sy mpiserasera izay “midikiditra” amin'ny fampiharana ny arofenitra ara-pahasalamana.
Nisy ny fanangonan-tsonia napetraka tany amin'ny fitsarana mihaika ny maha ara-dalàm-panorenana ilay fanambarana. Tao anatin'ny ahiahy ny famoahan'ny PN ny didim-pitsarana manameloka ny “vaovao faikany”.
Araka ilay didy hitsivolana , ny vaovao faikany dia izay vaovao, fampahalalana, angon-drakitra na tatitra izay diso tanteraka na amin'ny ampahany mikasika ny COVID-19 na ny fanambarana hamehana, na amin'ny endrika fampisehoana, sary na rakipeo na endrika hafa mety hanome teny na hevitra.
Miatrika fanagadrana telo taona sy/na onitra 100 000 RM (24000 dolara amerikana) ireo izay mandika ny didy hitsivolana.
Mamela ny polisy hiditra amin'ny angon-drakitra informatika ilay didy hitsivolana, ao anatin'izany ny tenimiafina sy kaody fanafenantsoratra. Azo ampiharina amin'ny mizaka zom-pirenena rehetra izany ary na dia natao ivelan'i Malezia aza ny fandikan-dalàna.
Nankato  Lalàna Manohitra ny Vaovao Faikany i Malezia talohan'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2018 saingy nofoanan'ny governemanta Pakatan Harapan teo aloha izany. Mampiditra indray ny lafiny sasany amin'ny lalàna 2018 ny didy hitsivolan'ny PN .
Iray amin'ny fitoviana eo amin'ireo fepetra roa ireo ny famaritana manjavozavo ny atao hoe “vaovao faikany.” Noho io antony io dia nampitandrina ny Ivotoerana momba ny asa fanaovan-gazety tsy miankina fa afaka manararaotra an'io lalàna io ny manampahefana:
Mahita sahady izahay fa hisy ny fanaraha-maso bebe kokoa sy ny fanafihana ny fiainanay manokana, ny fanivanana fahatany ny tati-baovao mitsikera sy manohitra, ary noho izany, ny fanafihana ny fahalalahan'ny haino aman-jery, ary ny famoretana amin'ny fomba tsy mifandanja ny lahateny ara-dalàna toy ny tsy fitovian-kevitra sy ny fandisoam-baovao.
Nampahatsiahy ny governemanta i Zaid Malek, mpandrindra ny Mpisolovava ho an'ny Fahafahana (Lawyers for Liberty) fa tsy lisansa hamoronana lalàna fahatany ny hamehana. Nanamarika ihany koa ity vondrona ity fa ny “fanambarana hamehana” dia tsy voafaritra ao anatin'io didy hitsivolana io. Mampiahiahy  ihany koa fa manembatsembana ny fiainana antakonan'ny olom-pirenena ny fahefana polisy fanampiny:
Ankoatra ny fanitsakitsahana ny zon'ny fahalalaham-pitenenana, dia tsy miraharaha mihitsy ny zon'ny fiainana manokana ilay didy hitsivolana amin'ny famelana ny manampahefana mpampihatra lalàna hitady izay fitaovana elektronika heverin'izy ireo fa “ilaina” hamitàna ny famotorana ataon'izy ireo.
Nanambara  ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Aliran fa “afaka mifehy mora foana izay fikasana hanaovana fanairana na fikorontanam-bahoaka ny lalàna misy. Nilaza ihany koa ny vondrona fa mandrahona ny hampisy hantsana bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina io didy hitsivolana io:
Ny fampitahorana ny olona amin'ny lalàna manasazy toy izany dia hanaisotra ny fifandraisana eo amin'ny governemanta sy ny vahoaka. Hampangina ny vahoaka izy io ary toy ny renoka ao anatin'ny bodofotsiny kosa ny governemanta.
Ny Ivotoeram-piheveran-draharaha momba ny demaokrasia sy ny raharaha ara-toekarena dia efa namerimberina  ny tsikera tany am-piandohana fa natao hampanginana ny hevitra tsy mitovy ny fanambarana hamehana:
Ity lalàna ity dia manamafy ny fahitana fa ny toetran'ny hamehana misy antsika amin'izao fotoana izao dia entina hampihenana izay endrika fitsikerana ny governemanta ankehitriny. Tokony ekena fa maro no nanome fitsikerana manome hevitra satria manahy ny toerana misy ny firenena izy ireo ary tena maniry fanatsarana.
Manana torohevitr a ho an'ny governemanta ny mpikambana iray ao amin'ny Parlemantan'i Selayang, William Leong Jee Keen :
Tokony hanohitra ny vaovao faikany ny governemanta amin'ny fanomezana fanambarana feno sy tohanan'ny porofo ara-tsiansa momba ireo raharaha ireo.
Ny fahatokiana dia tsy avy amin'ny fandevenana ny fahamarinana amin'ny endrika sazy mavesatra sy tsy mifandanja amin'ny fanapariahana vaovao.
Nanentana ny manampahefana i Gerakan Media Merdeka mba “hiady amin'ny vaovao tsy marina amin'ny zava-misy fa tsy ny fihetsika.”
Nanohana tsy tapaka ny endrika fanamarinana zava-misy izahay, indrindra amin'ny vanim-potoana ankehitriny [ny] areti-mandringana izay nahitana fisafotofotoana nateraky ny fizarana torohay tsy marina.
Tamin'ny 14 martsa lasa teo, nisy vondron'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nisolo tena ny mpikambana ao amin'ny Freedom of Expression Cluster nanao fihetsiketsehana  tselatra teo akaikin'ny parlemanta miantso ny hanafoanana io didy hitsivolana io.
Ireo fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena mifantoka amin'ny fahalalahana maneho hevitra dia nikarakara fihetsiketsehana am-pilaminana tao Jalan Parlimen androany nanohitra ny fanolorana ny taratasy sy ny fampiharana ny hamehana (Fahefana Ankapobeny) (No. 2) Ordonansa 2021. Ity ny fanambarana nataon'izy ireo. pic.twitter.com/a6VX3ANIxA
Nanome toky ny mpitsikera ny minisitry ny Serasera sy ny haino aman-jery marolafy Datuk Saifuddin Abdullah fa tsy hitondra any amin'ny sivana izany lalàna izany.
Hataonay antoka fa amin'ny vaovao faikany ny hetsika fa tsy amin'ny fanakianana. Amin'ny resaka demaokrasia, azo atao ny mitsikera, fa raha misy vaovao tsy marina, dia na iza na iza manaparitaka azy dia azo tratrarina (andraisana andraikitra). ”
Nilaza ihany koa izy fa fepetra vonjimaika  io didy hitsivolana io satria azo foanana io rehefa miverina tontosaina indray ny fotoam-pivorian'ny parlemanta ary enimbolana aorian'ny fanesorana ilay fanambarana hamehana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/04/09/152020/
 nampitandrina : https://cijmalaysia.net/cij-deeply-shocked-with-the-extreme-punitive-measures-undertaken-by-the-government-to-criminalise-fake-news/
 March 14, 2021: https://twitter.com/CIJ_Malaysia/status/1370955507372937218?ref_src=twsrc%5Etfw
 fepetra vonjimaika: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/03/13/fake-news-rule-only-for-short-term